Sideen ku ogaan karaa waxa adag ee aan haysto? Ku hel khiyaanadan! | War gadget
¿Sida loo ogaado waxa adag ee aan haysto? Illaa dhawr sano ka hor su’aashani way fududaan lahayd in laga jawaabo, maaddaama inta badan kombiyuutarada shaqsiyadeed ay ka fikirayeen kaliya nooca disk-ka ee IDE-ga ah; Dabcan, xaaladani waxay kacday haddii aan haysanno kombiyuutar caadi ah oo leh Windows, waxaa jiri kara kala duwanaansho gaar ah oo ku saabsan Mac iyo meesha, isticmaalaha uu dooran karo SCSI disk adag si uu u helo xawaare sare oo ku saabsan wareejinta xogta.
Maalmahan, aad ayey noogu adag tahay inaan ka hadalno nooca adag ee loo yaqaan 'IDE-ga ah' sida aan ugu soo jeedinnay tuduca hore, maadaama ay ahaayeen si dhakhso leh oo fududna loogu beddelo kuwa kale si dhakhso leh, tiknoolajiyad kala duwan lehna karti ballaadhan. Sikastaba, haddii aad heysato kumbuyuutar oo aad rabto inaad hayso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan diskiga adag, markaa waxaan kugula talin doonaa xoogaa tabaha ah iyo waliba, qalab gaar ah oo aad u ordi karto si aad dib ugu eegto macluumaadkan.
1 Sida loo ogaado waxa adag ee aan ku haysto Windows-ka
2 Macluumaad qaas ah oo ku saabsan darawalkeena adag ee Windows
2.1 Sifaynta Piriform
Sida loo ogaado waxa adag ee aan ku haysto Windows-ka
Haddii aan ka shaqeyneyno Windows, waxaa jira hab aad u fudud oo lagu awoodo dib u eegis ku samee sifooyinka darawalkeena adag "jaleecada"; Uma jeedno "maareeyaha diskiga" laakiin waxaan u jeednaa "optimizer" isku mid ah. Si aad u adeegsan karto khiyaanadan, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad raacdo talaabooyinka soo socda:
Xulo badhanka Bilowga Windows bidix hoose.
Goobta wax lagu qoro ku qor «tayadoodii»(Haddii loo maleeyo inaad haysatid nidaam qalliin oo Ingiriis ah). Haddii aad ku haysato Isbaanish, raadi «Optimize unugyada»
Ka dooro qalabka Windows-ka natiijooyinka la soo bandhigay.
Isla markiiba daaqada ama interface ee qalabkan ayaa furmi doona, taas oo run ahaantii imaaneysa midka naga caawin doona inaan hagaajino darawalkeena adag. Adiga oo aan qaban hawshan (in kastoo aad u isticmaali kartid wakhti kale), xaga kore ee is-dhexgalka waxaad ka helaysaa liiska dhammaan dirawalada adag ee lagu rakibay kombiyuutarka shaqsiga ah.
Shaashadda aan hore u soo jeedinnay waxaad ku yeelan doontaa suurtogalnimada inaad ku aragto darawalladan adag iyo meesha, sadarka labaad wuxuu tilmaamayaa nooca mid kasta oo ka mid ahi u dhigmayo. Waxaan si fudud u aqoonsan karnaa midka leh tiknoolajiyada SSD, ma ahan isku xaalad kuwa kale ee halkaa ku taxan, in kastoo ay fududahay in la cadeeyo inay noqon karaan nooca S-ATA, maadaama ay aad ugu adag tahay nooca SSD inuu kumbiyuutarka kula wadaago hal IDE.
Hadda oo aad ogtahay sida loo ogaado waxa adag ee aan ku haysto Windows-ka, waxaan arki doonnaa habab kale oo aan ku heli karno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nooca HDD ama SSD.
Macluumaad qaas ah oo ku saabsan darawalkeena adag ee Windows
Khiyaanada aan kor ku soo sheegnay ayaa ina siin doonta kaliya macluumaad guud oo ku saabsan darawalkeena adag, taasi waa, nooca tikniyoolajiyadda iyo sidaas darteed isku xiraha ay ku isticmaali karaan qaab dhismeedkooda. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo ogaado nooca adag ee aan ku haysto kumbuyuutarkayga si aan u helo macluumaad dheeri ah oo farsamo oo ku saabsan HDD-gaaga ama SSD, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad isticmaasho mid ka mid ah labada qalab ee aan ku xusayno xilligan.
Sifaynta Piriform Waa mid ka mid ah, oo aad si buuxda uga soo dejisan karto bilaash (illaa iyo inta aadan codsanayn taageero) websaydhkeeda rasmiga ah. Markaad ku dhex wado qalabka qalabka, dhammaan qalabka adag ee ku xiran kombuyuutarkaaga shakhsi ahaaneed ayaa la soo bandhigi doonaa.
Shaashadda aan ku dhejinnay qaybta sare waxay na tusaysaa mid kasta oo ka mid ah darawaladan adag laakiin, macluumaad gaar ah leh; Xuquuqda halkaas ayaan ku arki doonnaa haddii ay noqdaan nooca SATA iyo xawaaraha wareejinta ay leeyihiin.
CrystalDiskInfo waa aalad kale oo xiise leh oo aad si buuxda ugu isticmaali karto bilaash; Websaydhka soo-dejinta waxaad ka kala dooran kartaa nooca aad ku rakibayso Windows ama laptop-ka, kan dambe ayaa ah midka ugu badan ee lagula taliyay si aan looga tegin diiwaanada isticmaalkiisa gudaha Windows-ka.
In kastoo qalabkani wuxuu kaloo na siinayaa macluumaad khaas ah, laakiin waa wax yar oo laga fahmi karo waxa aan kor ku soo sheegnay na siin karaan. Halkan waxaan ku haysannaa fursad aan ku aragno nooca diskiga adag ee aan haysanno, xawaaraha akhriska iyo qorista, waxqabadkiisa, heerkulka hadda uu marayo, waqtiga ay ku jirtay xogta kale oo badan.
Wax kastoo aad ubaahantahay markay timaado ogaadaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan darawalkaaga adag, Mid kasta oo ka mid ah saddexda beddel ee aan ku soo sheegnay qodobkaan ayaa noqon kara mid waxtar badan leh. Waxaan rajeynaynaa inaad xallisay shakigaaga oo aad horayba u ogayd sida loo ogaado waxa adag ee aan haysto kumbuyuutarka lagu rakibay.
Miyaad taqaan habab badan oo lagu ogaado? Aan ogaano!
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sideen ku ogaan karaa waxa adag ee aan haysto?
aad ii fiican syrian. Mahadsanid!
Maaha Roi dijo
Roi wuu yaabay
Kujawaab not Roi
SpaceX horeyba waxay uheesay Falcon Heavy-kiisii ​​uguhoreeyay